आज धुमधामका साथ विश्वकर्मा पुजा गरिदै , पूजा विधि सहित - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन ०१, २०७८ समय: ७:००:३१
सुन्दरहरैंचा / आज अशाेज १ गते वास्तुदिवस अर्थात १७ सेप्टेम्बर भगवान विश्वकर्माको धुमधामका साथ पूजा गरि मनाइदैछ । विश्वकर्मा बाबाकाे जन्म दिन भएकोले यस दिनलाई विश्वकर्मा जयन्ती पनि भनिन्छ । विश्वकर्मा पूजाको दिन उद्योग, कलकारखाना र हरेक किसिमका मेसिनहरुको पूजा आजा गरिन्छ । नेपालकाे विभिन्न जिल्ला लगायत भारतमा समेत विश्वकर्मा पूजा उल्लासपूर्ण तरिकाले मनाइन्छ । विभिन्न उद्योग कलकारखानाहरुमा विश्वकर्मा पूजाकाे ठूलाे महत्त्व रहेको छ । यो पूजा सबै कलाकार, शिल्पकार र औद्योगिक घराना, व्यापारी र मजदुरहरुले गर्ने गर्छन । आजकाे दिन धेरैजसो कलकारखाना बन्द रहने तथा मानिसहरुले हर्षोल्लासको साथमा भगवान विश्वकर्माको पूजा गर्छन् ।
विश्वकर्मालाई विश्वकै सबैभन्दा पहिलो इन्जिनियर तथा वास्तुकार भनेर भनिने गरिन्छ । उनले पाताल, मध्यलोक र स्वर्गलोक गरी तीनै लोकको निर्माण गरेकाे भन्ने धार्मिक जानकारहरु बताउँछ । भगवान महादेवले ब्रह्मा तथा विष्णुलाई सृष्टिको सृजना र पालनको छुटछुट्टै जिम्मेवारी दिएका थिए । सृष्टिको सृजना गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन ब्रह्माले आफ्नो वंशजदेव शिल्पी विश्वकर्मालाई आदेश दिएकाे भन्ने मान्यता रहेकाे पाहिन्छ ।
भगवान विश्वकर्माको महत्वको वर्णन ऋग्वेदमा ११ ऋचाहरु लेखेर उल्लेख गरिएको छ । बाबा विश्वकर्माकाे अनन्त तथा अनुपम कृतिमा सत्ययुगमा स्वर्गलोक, त्रेतायुगमा लंका, द्वापयुगमा द्वारिका साथै कलियुगमा जगन्नाथ मन्दिरको विशाल मुर्ती आदि रहेका छ । विश्वकर्माकाे पूजनले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राकृतिक उर्जा दिनुका साथै काममा आउने सबै बाधा अड्चनहरुलाई तोडिदिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको पाहिन्छ । विश्वकर्मा एक महान ऋषि तथा ब्रम्हाज्ञानी थिए । उनले नै देवताको घर, नगर, अस्त्र-शास्त्र आदि निर्माण गरेकाे हुँदा उनी महान शिल्पकार थिए ।
वास्तुदेवका अंगिरसी नामक पत्नीबाट विश्वकर्मा जन्मिएका हुन् । महाभारत आदिपर्व अध्याय १६ श्लोक २७ एवं २८ मा पनि यसको स्पष्ट उल्लेख गरेकाे पाइन्छ । वराह पुराणको अ. ५६ मा उल्लेख भए अनुसार सबै मानिसको उपकारार्थ ब्रम्हा परमेश्वरले विश्वकर्मालाई पृथ्वीमा उत्पन्न गरेका हुन् । उनले घर, कुवा, रथ, शास्त्र आदि समस्त प्रकारका शिल्पीय पदार्थको रचना गरेका थिए । प्राचिन कालमा जनकल्याणार्थ मनुष्यलाई सभ्य बनाउने संसारमा अनेक जीवनोपयोगी वस्तु निर्माण गरेका कारण उनलाई आचार्यको पनि आचार्य भनिन्छ । प्राचीन समयमा इन्द्रपुरी, लंकापुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पाण्डवपुरी, सुदामापुरी, द्वारिका, शिवमण्डलपुरी, हस्तिनापुर जस्ता नगरको निर्माण विश्वकर्माले नै गरेका थिए । कर्णका कुन्डल, विश्वको सुदर्शन चक्र, पुष्पक विमान, शंकर भगवानको त्रिशूल, यमराजको कालदन्ड आदि वस्तु निर्माण गरेका कारण उनलाइ सम्मान पूर्वक विश्वकर्मा बाबा (गुरु) काे रुपमा सम्झने गरिन्छ ।
यो मान्यता रहेको छ कि प्राचीन कालमा सबैको निर्माण विश्वकर्माले गरेका थिए । स्वर्ग लोक, सुनको शहर, लंका तथा कृष्णको नगरी, द्वारका यी सबैको निर्माण विश्वकर्माको हातबाट नै भएको थियो । कुनै कुनै कथामा उल्लेख भए अनुसार भगवान विश्वकर्माको जन्म देवता तथा राक्षसहरु मिलेर समुन्द्र मन्थन गर्दा विश्वकर्माको जन्म भएको थियो । हिन्दू पौराणिक कथाका अनुसार विश्वकर्माले पूरै ब्रह्माण्डको निर्माण गरेका थिए । पौराणिक कालमा चलाईने सबै हतियारको निर्माण पनि विश्वकर्माले नै गरेका थिए । जसमा बज्र पनि सामेल छ । जुन भवगान ईन्द्रको हतियार थियो । वास्तुकारहरुले कैयौ युगदेखि विश्वकर्मालाई आफ्नो भगवान मानेर उनको पूजा गर्दै आईरहेका छन् ।विश्वकर्मा बाबाकाे सम्झनामा नेपालका कालीगढले आज भव्य रुपमा विश्वकर्मा बाबाको पूजा गरी उनको विद्वताको सम्मान गर्ने र यसो गरेमा आफूमा पनि विश्वकर्माको गुण प्राप्त हुने विश्वासका साथ विश्वकर्माको पूजा गर्दछन् । आजको दिनलाई वास्तुशास्त्रीले वास्तु दिवसका रुपमा समेत मनाउने गर्छन् ।
विश्वकर्मा पूजामा वर्षभरि कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर मेसिनको पूजा गर्ने चलन छ । विशेष गरी धातुबाट बनेका उपकरण चलाउने मजदुरहरुले आजको दिन धुमधामसंग पुजाआजा गरी मनाउने गर्दछन् । मुलुककाे विभिन्न स्थान तथा प्रदेश न १ काे मुख्य शहर तथा अाैधेगिक क्षेत्र विराटनगर , दुहवी , इटहरी धरान , सुन्दरहरैंचा , उर्लाबारी तथा विर्तामोड लगायतका स्थानमा धुमधामका साथ विश्वकर्मा पुजा विगत वर्ष झै गरिदैछ । काेराेना कहरका कारण लामाे समय देखि बन्द र निस्कृय रहेका उद्योग कलकारखाना पनि केही मात्रामा सहज अवस्था भए संगै हाल सञ्चालनमा आएकाे छ ।
आजकाे दिन सवारी साधन मेसिनहरुको पुजा गरिनुका साथै उद्योगहरु खुल्ला राखेर सवैलाई भ्रमण र प्रसाद ग्रहण गराउने चलन रहेको पूर्वाञ्चल ल्यूब आयल प्रा. लि. (विराटचाेक) का प्रबन्ध निर्देशक भाेलेश्वर दुलालले बताए ।
भगवान विश्वकर्माको प्रतिमा बनाएर यसैमा पूजा गर्ने गरिन्छ । कसैकसैले भने भगवान विश्वकर्मालाई नै आफ्नो भगवान मानेर पूजा गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । यस दिन जग्ये बनाएर यज्ञको समेत आयोजना गरिन्छ ।यस दिन पूजामा बस्नु भन्दा पहिले स्नान गर्नुपर्छ । स्नान गरिसकेपछि भगनाव विष्णुको ध्यान गर्नुपर्छ र त्यसपछि त्यहीँ कतै भगवान विश्वकर्माको पनि मूर्ति राख्नुपर्छ । यसपछि आफ्नो दाहिने हातमा फूल अक्षता लिएर मन्त्र पढ्नुपर्छ । फूल अक्षतालाई जलमा छोडिदिनुपर्छ । यसपछि हातमा रक्षासूत्र बाँधी भगवान विश्वकर्माको पूजा ध्यान गरिसेपछि उनको विधिवत पूजा गर्नुहोस् ।
पूजा पछि विविध प्रकारको यन्त्र तथा औजार आदिको जल, अक्षता, फूल तथा मि‍ठाईद्वारा पूजा तथा विधिवत रुपमा हवन गर्नुहोस्। भगवान विश्वकर्माको पूजा गर्दा पढिने मन्त्र , ॐ आधार शक्तपे नमस् और ॐ कूमयि नमस्, ॐ अनन्तम नमस्, ॐ पृथिव्यै नमस् रहेको पण्डित सूर्यप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
सुन्दरहरैंचा काँग्रेस नगर सभापतिमा भक्तिप्रसाद सिटौला विजयी , नगर तथा वडाकाे अधिवेशनमा देउवा पक्ष कमजोर
श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद्काे जिल्ला अध्यक्षमा भट्टराई
पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा जनगुनासाे बढे पछि स्थानीय सरकार द्वारा अनुगमन तथा छलफल
सुन्दरहरैंचामा घरमै बसेर अनलाइनबाटै कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था
सुन्दरहरैंचामा लुटेरा समूहलाई पक्रन सफल प्रहरीलाई नगरपालिकाद्वारा सम्मान